Mootummaan waa'ee 'barattoota eessa buteen dhabamee' ragaa akka kennuf gaafatame - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaan waa'ee 'barattoota eessa buteen dhabamee' ragaa akka kennuf gaafatame
26 Bitooteessa 2020
Mootummaan Itoophiyaa waa'ee barattoota Yunivarsitii Dambi Dolloo 17 baatiiwwan muraasa dura 'namoota hin beekamneen ukkaamsamuun isaanii'' himame ilaalchisee ragaa akka kennuu jechuun Amanastii Intarnashinaal gaafate.
Dhaabbatichi ibsa baaseen akka kaa'eetti, tatamsa'ina koronaavaayirasitiin walqabatee yunivarsitoonni biyyattii guutuutti argaman akka cumafan wayita himame kanatti waa'een barattoota essa buteen isaanii hin bekamnee kunneen yaachisaa ta'uu ibseera.
Keessattuu tibba weerara koronaavaayirasii kanatti yaaddoon maatiiwwan barattoota baatii Sadaasaa keessa ''ukkaamamuun isaanii himamee'' kanneenis caalaa akka cimu kan taasisee ammoo Lixa Oromiyaatii tajaajilli bilbilaafi intarneetii waan adda citeef ragaa argachuu waan dhabaniif jedheera.
Adda cituun tajaajila intarneefi bilbilaa baatii Amajjii irraa kaasee Lixa Oromiyaatti adda citees barbaacha barattoota kanneeniin wal qabatee oddeeffannoo akka hin argamneef danqaa ta'uu dhaabbatichi himeera.
''Weerara koronaavaayirasitiin wal qabatee gutuu Itoophiyaa keessatti yaaddoon kan babalatte yoo ta'u, maatiiwwan barrattoota 'ukkaamfamaniiru' jedhanis caalaa yaaddoo cimaa keessa galcheera,'' jedhan dhaabbatichatti Daarektara Ittaanaa Baha Afriikaa kan ta'an See'if Magaangoo.
''Angaa'oonni Itoophiyaas nageenya barattootaa eeguun yunivarsitiiwwan cufuuf tarkaanffiin fudhate kan dinqisifamu yoo ta'u, haaluma walfakkaatuunis tarkaanfii barattoonni 'eessa buteen isaanii hin beekamne' kanneen maatiitti deebii'an fudhachuu qabas,'' jedhan.
Amansitiin maatiiwwan barattoota eessa buteensaanii wallaalamee hedduu dubbiseera kan jedhe yoo ta'u, abdii kutannaa keessa galusaanii akka ibsan hima.
Barattoonni 'kanneen ukkaamfaman keessaayi'' jedhamteefi barattuu gosa barnoota Baayoteknolojii waggaa sadaffaa ta'ushee himte barattuu Girmaanash Yeneenah kan ta'an Obbo Yenanah Addunyaa dhaabbatichatti akka himaniiti, ''ijoolleen keenya baratanii egeree gaarii akka qabaataniif ergineee turre.
Amma garuu eessa akka jiran wallaalleera,'' jechuun Amanistiitti hima.
''Guyyaa ukkamfamuun isaanii nutti himamee kaasee boyicharratti argamna. Akka kadhannuuf nutti himte turte. Keessattuu haatishee baayyee hubamtee jirti.
Mootummaarraa wanti dhageenyi omtuu hinjiru,'' jedhaniiru Obbo Yenanah.
'Qaamooleen barattoota ukkaamsan jalqabarratti bilbiluun maatiisaaniitti akka dubbataniif kan hayyamaniif turan yoo ta'u, isaan booda maatiin kunneen waa'ee ijolleesaanii osoo hin dhagahiin baatii sadii darbeera jadha dhaabbatichi.
''Gochi Lixa Oromiyaatti tajaajila bilbilaafi intarneetii adda kutuun gonkumaa fudhatama kan hin qabneefi mirga odeeffannoo argachuufi yaada bilisaan ibsachuu namootaa kan cabseedha,'' jechuun Sayifaa Magaangoo dubbataniiru.
''Kanaafu, tajaajilliwwan qunnamtii naannichatti adda kutamee atattamaan deebiifamuun barattoota 'eessa buteen isaanii dhabame' qofaa osoo hin taane ummanni tatamsa'ina dhukuba koronaavaayirasiirratti odeffannoo akka argatu taasisuu qaba,'' jechuun mootummaaf waamicha dabarseeras.